Anosivolakely « TANIKO Madagascar
MORCEAUX D’HISTOIRE & GENEALOGIE
« …Ny ranomasina no vala-parihiko! »
Nangonin’i Moïse Ramilamintsoa
FISEHOAN’I MASINA MARIA MPANJAKAVAVY TETO MADAGASIKARA
Ilay trano nisehoan’i Masina Marie tao Anosivolakely (efa nohavaozina fa trano feta taloha).
Efitrano nisehoan’i Masina Maria
Lehilahy malagasy raim-pianakaviana no nofidian’i Masina Maria hisehoana hampitana ny hafatra.
RAHARIMANANA Patrice Charles no anarany. Teraka tamin’ny 09 Febroary 1950 tao Ambatomanoina, Fivondronan’Anjozorobe, zanak’Itompokolahy Rafalimanana Jean Charles sy Ramatoa Ralinoro Philomene. RANGORIVAO Marie Claire no anaran’ny vadiny, teraka tamin’ny taona 1955 tao Antanifotsy Atsimo, Fivondronan’Ambatolampy. Sivy (9) mianadahy ny zanak’izy mivady: dimy (5) vavy ary efatra (4) lahy. Vao 14 taona monja Ra-Patrice dia efa nodimandry ny rainy. Efa 15 taona no naha-katekista an-tsitra-po azy. Ary mbola tanora izy dia efa tia mivavaka sy tia mampivavaka. Varotra somary miaro fambolena no raharahany.
Izy no nanorina ny fiangonana katolika tao Ankokaina tamin’ny 17 Febroary 1974 hatramin’ny 28 Desambra 1980. Nanorina ny fiangonana katolika tao Anosivolakely koa izy tamin’ny 18 Oktobra 1987, ary ny fiangonana tao Ankokaina ihany no nosoloina an’ity ao Anosivolakely ity. Ary dia izao izy nasain’i Masina Maria nanorina ny fiangonana nofidiany hanajana azy ao Anosivolakely izao.
Aiza no misy an’Anosivolakely?
Anosivolakely dia tanàna kely ao amin’ny Distrikan’i Betatao, ao amin’ny Fivondronan’Anjozorobe, 51 kilometatra miala an’i Betatao, mianavaratra andrefana no misy an’Anosivolakely.
Tao amin’ny tanàna kely antsoina hoe Andasibe, tokony ho roa ambin’ny folo na dimy ambin’ny folo (12-15 kms) kilometatra miala an’Anosivolakely no nisehoan’i Masina Maria voalohany taminy. Manana tanimbary any amin’io toerana io Ra-Patrice. Ny fiainana moa sarotra ka nanam-pikasana hivarotra io tanimbary io izy.
Nila hevitra sy nangataka tamin-dRapatrice ny olona vitsivitsy tao Andasibe Andriamenakely mba hanampy azy ireo amin’ny fanaovana trano fiangonana na sekoly, sy mba hampianatra ny olona hivavaka. Nanaiky Ra-Patrice ary nanome fotoana azy ireo tamin’ny 10 Novambra 1990.
Tonga soa aman-tsara tany Andasibe Ra-Patrice ny Asabotsy 10 Novambra 1990. Rehefa avy nampianatra hira sy vavaka ny olona izy ny tolakandro, dia nampandrosoana tao amin’ny trano natokana handraisana ny vahiny nony hariva, ka enina (6) mirahalahy izy no niray trano fandriana tao.
Nony vita ny sakafo hariva, dia samy niomana hatory ireto namany dimy lahy, fa Ra-Patrice kosa dia mbola nanomana ny fandaharana izay tokony hitondrana ny fotoam-pivavahana ny ampitso Alahady 11 Novambra 1990. « Tsy mbola nieritreritra ny hatory mihitsy aho, hoy Ra-Patrice, no sady lasa eritreritra koa nandinika ny fianako sy ny vady aman-janako ary ny fahantrany… Sahabo ho tamin’ny 10 ora sy sasany alina, raha teo am-pieritretana iny aho, no nisy zavatra niseho toy izao: nisy tselatra in-telo miantoana,…taorian’izay nisy lel’afo toy ny lel’afon-dabozia, saingy lehibebe kokoa sady nihanazava hatrany, ka dia nazava be tao amin’ilay efitra nisy anay 6 mirahalahy »…
» Avy eo, dia nisy zavona niforona ka teo amin’io zavona io no nisy lagoraoty, ary niditra tao ‘lay Vehivavy izay nitondra Testamenta Vaovao ». (Marihina fa tamin’io fisehoana voalohany io IHANY Masina Maria no nitondra boky-na Testamenta Vaovao). Ary dia niteny tamiko izy nanao hoe: « Izaho no Masina Maria Mpanjakavavy Renin’i Jesoa Kristy; nirahan’ny Zanako aho hampita hafatra ary hampanao asa anao ». Dia namaky ny Timote 3, (1-17) izy. Novakiany hatramin’ny faany izany alohan’ny hiresahanay.
Ny toetoetran’ilay Vehivavy
1°) « Nirahan’ny Zanako aho ho aty aminao. Tiako loatra ianareo ry zanako, nefa mila tsy ho tantiko intsony ny fahatezeran-janako satria difotra ao anatin’ireto faharatsiana ireto ny olombelona, indrindra fa ny vahoaka Malagasy, dia:
ny fitiavan-tena, ny fitiavam-bola, ny fitiavam-boninahitra, ary ny fahafinaretan’ny nofo
. Koa amin’izao fotoana izao dia 60% ny Malagasy no mahantra dia mahantra tsy hay lazaina. Koa miangavy ny Malagasy aho mba hibebaka sy hiara-mivavaka amiko mangataka ny famindram-pon’ Andriamanitra. »
Ny Fiangonana sy ny lagraoty nasain’i Masina Maria naorina
Ny Fiangonana misy lagraoty
Manomboka amin’ny taona 1991 ka hatramin’ny taona 1995, dia hihamafy hatrany ny fiainan’ny Malagasy: hisy loza voajanahary, hain-tany, tondra-drano, rivo-doza…, ady an-trano madinidinika, rà latsaka… Ary amin’ny taona 1995 dia ho tafakatra any amin’ny 80% ny Malagasy mahantra fadiranovana. Koa izany no angatahako ny Malagasy mba hibebaka sy hiala amin’ireo fototry ny faharatsiana ireo, satria raha lasa ireo dimy taona ireo ka tsy miova ny Malagasy, dia ho mafimafy kokoa noho izany indray ny fiainana: mety ho ady an-trano, ka fananana maro no ho potika amin’izany, ain’olona maro no hafoy, miampy ny loza voajanahary…
Koa noho izany, mandehana ianao manambara izany amin’ny Kardinaly, izy kosa hampita izany amin’isan’ambaratonga, ka ho tonga hatrany amin’ny madinika indrindra. Ilazao koa ny mpitondra Fanjakana isan-tsokajiny sy ny FFKM, satria tratran’ireo faharatsiana ieo daholo, na ny mpitondra Fivavahana, na ny mpitondra Fanjakana, na ny olon-tsotra.
Tamin’izay fotoana izay dia niaiky Ra-Patrice fa tsy ho vitany ny hampita ny hafatra amin’izany olona ambony rehetra izany, satria izaho, hoy izy, dia tambanivohitra mahantra sady mavomavo. Koa niangavy izy mba ho olona hafa no hofidiany hanao izany, nefa dia nolaviny. Fantatro, hoy Ra-Patrice, fa tsy hihaino ahy ny olona ary lazainy ho adala aho.
– Tsy hihaino anao ary tsy hiraharaha anao izy ireo, nefa tsy maintsy ilazàna, hoy Masina Maria, ary aza kivy. Amin’izay, rehefa tonga ny andro sarotra, tsy afaka hilaza intsony izy ireo hoe tsy mahafantatra izany. Niangavy azy Ra-Patrice mba hiseho amin’olona roa na telo, kanefa dia nolaviny izany.
2°) Manaova Fiangonana mirefy 9,90m ny sakany ary 30m ny lavany ao Anosivolakely ianao, fa ho avy hitsaoka ny Zanako ary hanaja ahy amin’io toerana io ny olona maro, tsy ny Malagasy ihany fa ny olona eran’izao tontolo izao. Ny vola hanaovana io fiangonana io dia tsy ny volan’ny Malagasy, fa hisy fikambanana avy any ivelany hanampy anao. Raha misy Malagasy te-handray anjara, dia asaivo hanaovany asa fitiava-namana na asa fiantrana ny volany.
Tsy ho vitanao irery anefa izany, fa hisy Malagasy anankiray hanampy anao amin’izany, ka ny fomba hahafantaranao io olona io dia toy izao: handre feon’olona ianao miteny hoe « Izaho dia mivavaka isan’andro isan’andro, ka raha mbola afaka foana aho, dia mamonjy lamesa arak’izay azoko atao, indrindra ny Alahady ». Mety hoa amin’ny vory vahoaka, na amin’ny fampielam-peo, na any am-piangonana no handre nesanao izany.
Tadiavo io olona io, ary izao no ambaranao azy: « I Masina Maria no naniraka ahy. Efa nangataka tamin’ny zanany ianao, ary nomeny lavitra noho izay nangatahanao, koa miangavy anao Izy hanampy ahy hanao ity Fiangonana ity ».
3°) Sarotra ny hahavitako izany, hoy Ra-Patrice. Ho vitanao io, ho i Masina Maria, kanefa raha tsy mahatoky aloha ianao, dia ny asa ataonao voalohany: satria tsy mbola misiny tranon’i Mpmpera ao Anosivolakely, dia ataovy io trano io aloha. Tsy mitady fanampiana na amin’iza na amin’iza ianao, fa ataovy amin’izay zava-misy eo am-pelatananareo mivady. Tsy mahazo mivarotra tanimbary na zavatra hafa. Satria tamin’io fotoan’io indrindra manko Ra-Patrice no saika hivatrotra ilay tanimbary tany Andasibe Andriamenakely. Dia nomeny koa ny refin’ilay trano.
4°) Alohan’ny hanangananao an’io fiangonana io, dia hisy olona hitsodrano anao, ka ny ahafantaranao azy dia, ho faty izy aloha vao hovelona indray, ka min’izay hiteny aminy ianao hoe: « Mikasa hanangana fiangonana ao Anosivolakely aho, ka mba mangataka ny tsodranonao; raha velona soa aman-tsara ianao, dia miara-mivavaka isika mba hahavitany soa aman-tsara, fa raha maty kosa ianao, dia mivavaha ho anay any. Izao no teny voalan-dRaPatrice ny amin’izany: « Maty ny Dadatoako ny asabotsy hariva, ary natsotra fa ho avy ny mpiray monina hamangy; kanefa raha niandry azy izahay, dia nihaniaina indray izy tamin’ny 12 ora alina tany ho any, nierotra toa nahazo tory… Ny alahady maraina, afaka niteny… Ny alahady hariva afaka niarina nitsodrano ahy sy ireo nanatrika… ary ny alatsinainy tamin’ny telo ora hariva dia maty! »
5°) Mbola hiteraka zaza faha-9 ianareo mivady amin’ny taona 1991.
6°) Nomen’i Masina Maria tamin’io fisehoana voalohany io ihany koa ny Tenin’ny Soratra Masina izay tokony hampieritreritra antsika hibebaka. « Raha misy olona te-hahita ahy, hoy izy, dia asaivo mamaky sy mandinika ireo tenin’ny Soratra Masina ireo izy. Ireo kosa no hibaiko azy hiasa sy hiova ».
ny toko sy ny andinin’ireo Tenin’ny Soratra Masina nasain’i Masina Maria ho vakiana sy ho dinihina ireo:
7°) Anisan’ny zavatra nohamafisin’i Masina Maria dia ny Sakramentan’ny fibebahana na Konfesy. « Mazotoa mikonfesy, hoy izy, fa izay avelan’ny Pretra dia avelan’Andriamanitra. Aoka ho raisina amim-pamendrehana ny Kominio ».
8°) Nampianatra an-dRaPatrice nivavaka koa i Masina Maria. « Rahefa mivavaka, hoy izy, dia ataovy vokatry ny fo, fa aleo mahavita kely tena vokatry ny fo, toy izay manao vavaka lava reny, na toko sapile be dia be, nefa ny saina any amin’ny zavatra hafa. Lazao izay ao am-ponao ka ataovy toy ny eo anatrehanao mihitsy Andriamanitra sy izaho Reninao ».
9°) Nasain’i Masina Maria nanao sary mivongana izy araky ny fahitany azy, ka apetraka eo amin’ilay lagoraoty kely eo ambonin’ ny Fiangonana. Ny halavany, hoy izy, dia 1,54m ka hatramin’ny 1,74m.
Fa ankoatr’ireo, dia ao koa :
– ny fanaovana trano fianarana (sekoly hanabeazana ny ankizy ara-pinoana).
– ny fananganana trano fitsaboana;
– ny asa fiantrana, sns…
Nambaran’Ingahy Patrice fa tamin’io fisehoana voalohany io dia vahotra toa misy mangoritsina ny vanin-taolandohaliny sy ny sandriny. Tsy naharitra anefa izany.
Mbola niseho tamin’dRaPatrice i Masina Maria fa tsy tany Andasibe intsony, izay toerana nandalovany ihany, fa tao Anosivolakely toerana ipetrahany miaraka amin’ny vady aman-janany. Efa nisy indraik’ambiny folo (11) izao no niseho taminy i Masina Maria, ka ankoatran’ny fisehoana voalohany tamin’ny 10 Novambra 1990, dia ireto avy ny manaraka (hatramin’ny daty nanoratana ity lahatsoratra ity (15 Oktobra 1996):
Fisehoana faharoa: 29 Marsa 1991, tamin’ny 9 ora alina; Fisehoana fahatelo: 13 Avrily 1992, tamin’ny 5 ora hariva; Fisehoana fahaefatra: 09 Avrily 1993, tamin’ny 5 ora hariva; Fisehoana fahadimy: 01 Avrily 1994, tamin’ny 5 ora hariva; Fisehoana fahaenina: 23 Mey 1994, tamin’ny 5 ora hariva; Fisehoana fahafito: 15 Zanvie 1995, tamin’ny 5 ora maraina; Fisehoana fahavalo: 23 Mey 1995, tamin’ny 5 ora maraina; Fisehoana fahasivy: 18 Aogositra 1995, tamin’ny 5 ora maraina; Fisehoana fahafolo: 25 Novambra 1995, tamin’ny 9 ora maraina; Fisehoana faha-11: 25 Marsa 1996, tamin’ny 5 ora 45 hariva.
13°) Nandritry ny fisehoana faharoa ka hatramin’ny fahasivy, dia ny fanaraha-maso ny fanorenana ny trano fiangonana no nibahan- toerana, no sady nankahery an-dRaPatrice izy eo amin’ny fampitàna ny hafatra tsy maintsy tanterahiny.
14°) Tamin’ny fisehoana fahafolo, izany hoe ny 25 Novambra 1995,
andro fankalazana an’i Jesoa Kristy Mpanjaka
, dia nanome ireo Tenin’ny Soratra Masina ho vakiana amin’ny Sorona Masina izy, dia ireto izany:
Tamin’io fisehoana io koa no nanambaràny ny faniriany
mba hisian’ny Fivahiniana Masina in-droa isan-taona raha kely indrindra, ao Anosivolakely
, izay toerana nofidiany hitsaohana an’i Jesoa Kristy Zanany sy hanajana azy Reniny, ary toerana hibebahana. Momba ny fibebahana, dia nasiany teny manokana momba ny Konfesy. Mangataka izy mba hisy konfesy amin’io toerana io:
1- Konfesy ho an’ny olona manana sampona: hahazo fahasoavana manokana izy ireo na dia tsy hafaka handray Kominio aza.
2- Ho an’ny olona efa ela no tsy nikonfesy, am-bolana na an-taona maro,
3- Ho an’ny olona efa zatra mikonfesy na ireo efa mikonfesy matetika.
« Mazotoa mikonfesy, hoy izy, fa izay avelan’ny Pretra dia avelan’Andriamanitra! ».
15°) Tamin’ny fisehoana faha-11, ny 25 Marsa 1996, dia nanafatrafatra i Masina Maria ny tokony hivavahantsika tsy ankijanona, ary nomeny toerana manokana amin’izany ny Raozery. Ny zavatra nampiavaka ity fisehoana indray mandeha ity tamin’ireo teo aloha, dia ny
fisian’ny fahazavana nataon’i Masina Maria hitan’ny olona niara-nivavaka tamin-dRaPatrice
, mba hamantaran’ireo olona ireo fa miseho izy. I Masina Maria no nanambara tamin-dRaPatrice fa io fahazavana io dia banjinin’ireo olona ireo mandritra ny fifanakalozan-kevir’ izy mianaka. Ary raha vao lasa izy, dia niala niaraka tamin’izay koa ilay fahazavana hitan’ireo olona ireo.
Tamin’ny fisehoana rehetra, dia teny gasy mazava tsara no nifampiresahan’izy mianaka, na dia tarehim-bazaha aza no nahitan-dRaPatrice ny endriny. Ary toy ny fitafiana tamin’ny fisehoana tany Lourdes no fanamiana teny amin’i Masina Maria.
Marihana etoana, fa amin’izao fotoana izao, dia efa nahazo ny hafatra tandrify azy daholo ireo olona nanirahan’i Masina Maria an-dRaPatrice. Tamin’ny 24 Mey 1996 no nihaonany mivantana tamin’ny Filoham-pirenena malagasy, Andriamatoa ZAFY Albert. Tomombana tamin’io daty io ny fampitàna ny hafatra rehetra .
Lalan’ny Hazofijaliana Masina an-tendrombohitra
Nanomboka ny taona 2017 dia noraran’ny Arsevekan’Antananarivo ny Fivahinianana masina eny sy ny any Soanarivo ary Soaniroa – Mahitsy fa tsy manaraka ny fampianaran’ny Eglizy.